လမ်းပြကြယ်: မလေးငယ် ဆိုသော မလေးရှားရောက် အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦးမှ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ..။
အစ်ကိုတို့ရေ အစ်ကိုတို့ကို ညီမအနေနဲ့ ဆက်သွယ် ပြောချင်တာလေး နည်းနည်း ရှိပေမဲ့ ဘယ်လို ဆက်သွယ်ရမှန်း မသိလို့ အင်တာနက် ပေါ်ကပဲ အိတ်ဖွင့် ပေးစာ အနေနဲ့ ပို့လိုက်ပါတယ်ရှင်။ ပြောချင်တာတွေ များတော့ စာက နည်းနည်း ရှည်သွားလို့ သည်းခံပြီး အဆုံးထိ ဖတ်ပေး စေချင်ပါတယ်နော်။ ညီမက ပီနန်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ပါ။ အစ်ကိုတို့ အကြောင်းကို ညီမ စသိတာတော့ နည်းနည်း ကြာပါပြီ။ ညီမ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က
ညီမကို ပြောပြလို့ပါ။ သူပြောပြတာကတော့ မလေးရှားမှာ တခြား နိုင်ငံသား တွေနဲ့ တွဲပြီး အခြေအနေ ဆိုးနေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ မရှိရအောင် ရည်ရွယ်ချက် တူတဲ့ လူတွေ စုပြီး အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး လုပ်ဆောင် မယ်တဲ့။ သူ ပြောတာ ကြားတော့ ညီမလေး ဝမ်းသာ လိုက်တာ။ သူ့ကိုတောင် ပြောလိုက် သေးတယ်။ ဖြစ်သင့်တာ ကြာပြီလို့။ ဟုတ်ပါတယ်။ မလေးရှားမှာ မြန်မာ မိန်းကလေးတချို့ဟာ တခြား နိုင်ငံသားတွေနဲ့ အပျော် သဘောတွဲပြီး အခြေအနေ ဆိုးနေတာ ကြာပါပြီ။
Labels: အိတ်ဖွင့်ပေးစာ Posted by ဒီရေ
Smooth Berry January 8, 2012 at 10:10 PM
I completely agree.This is more about the girl's personality and where you are. Her age doesn't matter.But I never Been To Malaysia ..I been Bangkok and Singapore many many time.I seem theresalot of Asian girl.But I dunno how to separate which 1 is Chinese,which 1 is Myanmar.Coz they seem like the same featuring. Now Im studying in UK(the town call Wigan)there also many Burmese girl..some girls are living together with there boyfriends..they don't look there back..most of parents ,they want to be educator to there children.The parents earnalot of study coast for there children..they dunno what there children do there back..In facebook webpage ,some Myanmar girls post the photo with bikini(most from singapore..from US, UK ...etc)think about wot?? it shouldn't Be. I dunn mean to someone else.I'm just talk about some nudy girls..So...sory If I'm upset to some ppl else......
Smooth Berry January 8, 2012 at 10:14 PM